MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardLucky & Happiness MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
တတိယအကြိမ်မြောက်“ကံထူးပျော်ရွှင် ၂၀၂၁ အစီအစဉ် ” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်က ဘာပါလဲ?
လေးစား တန်ဖိုးထားရပါသော MPT သုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများ အတွက် နှစ်သစ်ကူး ကာလ ၂၀၂၁ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း ကံထူးပျော်ရွှင် ၂၀၂၁ နှစ်သစ်ကူး ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကြီး ကို တတိယအကြိမ်မြောက်နောက်ဆုံးအပတ်အဖြစ် ထပ်မံ ကျင်းပ ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကံထူးနိုင်မည့်တန်ဖိုးကြီးဆုကြီးများ က ဘာတွေပါလဲ?
“ကံထူးပျော်ရွှင် ၂၀၂၁ အစီအစဉ် ” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲ
၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။
ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀ ကျပ်ကို Chance (၁)ခုရရှိပြီး MPT4U app ထဲရှိ “Top up Hti Pauk” တွင် အဆိုပါ Chance ဖြင့် ထိပေါက်ဂိမ်း ကစားခြင်းဖြင့် tickets များ ရရှိပြီး အပါတ်စဉ် ဒေတာဆုကြီးများ (သို့)ငွေသား ဆုကြီးများ ကံထူးရယူလိုက်ပါ။
Ticket များများ စုဆောင်းခြင်းဖြင့် အံဩဖွယ်ရာဆုလက်ဆောင်ကြီးများ ကံထူးနိုင်မည့် အခွင့်အရေးများများ ရယူလိုက်ပါ။
ကံထူးရှင်များအား ပရိုမိုးရှင်းကာလအပြီးတွင် ရရှိထားသော Ticket ပမာဏ ပေါ် မူတည်၍ ကျပန်း ရွေးချယ် သွားမည်။
Click to Top-Up from MPT4U
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့အထိ
ဆုရရှိသော ကံထူးရှင်များအား ကံစမ်းမဲကာလပြီးဆုံးချိန်တွင် MPT မှ ဖုန်းခေါ်ဆိုသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက် နေ့တွင် MPT Myanmar တရားဝင် ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာမှာကြေညာပေးသွားပါမည်။
Ticket များများ စုဆောင်းခြင်းဖြင့် ဆုကြီးများကံထူးနိုင်မည့် အခွင့်အရေ:တွေ ရယူလိုက်ပါ!
Ticket(၅)ခု စုဆောင်းခြင်းဖြင့် ငွေသား ဆု သိန်း၁၀၀ ကျပ် iPhone 12 Pro + 1,000GB (365 days) နှင့် 100GB (60 days) ဆုကြီးများ ရရှိနိုင်သော အထက်ပါအခွင့်အလမ်း၃ခုလုံးတွင် ကံစမ်းခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကံစမ်းမဲကာလအတွင်းရရှိထားသော Tickets အရေအတွက်များအား *224# ကို ခေါ်ဆိုပြီးစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ယခု ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကြီးတွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ရန် Top Up လုပ်ရန်နှင့် MPT4U Appအား Download(သို့) Updateပြုလုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
Browser version (For Anyone)
ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကာလ – ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလ (၈) ရက်နေ့မှ ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့အထိ။
MPT GSM/WCDMA နှင့် Base Tariff prepaid စနစ် (လက်ရှိ) ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် ကာလအတွင်း မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆို အနည်းဆုံး၁၀၀၀ကျပ်မှစ၍ ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း ပါဝင်ကံစမ်းခွင့် ရှိပါသည်။
Base Tariff သုံးစွဲသူများသည် အပတ်စဉ်ဆုကြီးများကိုသာ ကံစမ်းခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဒေတာဆုလက်ဆောင်များကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ဒေတာဆုလက်ဆောင်များ အသုံးပြုလိုပါက ဆွေ/ ရှယ်/ ရွှေ အစီအစဉ်များသို့ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သုံးစွဲသူများသည် MPT4U app ထဲတွင် “ Top up Hti Pauk” ကစားပြီး အပါတ်စဉ် ဒေတာဆုများ (သို့) ဆုကြီးများ ကံစမ်းရန် tickets များ ရရှိကံထူးနိုင်ပါသည်။
ငွေလွှဲပြောင်း၍ ဖြည့်သွင်းခြင်း (Balance Transfer) သည် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ကံစမ်းရန် အကျုံးမဝင်ပါ။
အခြားဖုန်းနံပါတ်သို့ ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သွင်းပေးရာတွင် ဖုန်းဘေလ်လက်ခံရရှိသည့် ဖုန်းနံပါတ်သာ ကံစမ်းခွင့်များ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူများသည် Top up ၁ခါ လုပ်ပြီး Chance ၁ခု ရရှိပြီးတိုင်း “Top up Hti Pauk” တွင် ကစားပြီး Lucky Ticket များ ရယူရန် လိုအပ်သည်။
အဆိုပါထိပေါက် chances များသည် နေ့စဥ် ၂၃:၅၉း ၅၉ တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။­
Ticket များကို *224# ကို ခေါ်ဆို၍ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
တစ်ပတ်အတွင်း ရရှိထားသော Ticket များမှာ ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော အပါတ်စဉ်ဆုများ ရွေးချယ်မှု အတွက် ပါ၀င်ကံစမ်းခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကံစမ်းရာတွင် ပါ၀င်ပြီးဖြစ်သော Tickets များကို ကံစမ်းခွင့်ရရှိပြီးသော ရက်သတ္တပါတ်၏ နောက်အပတ် သောကြာနေ့ ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် (၀၀:၀၀) နာရီတွင် ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကံထူးရှင်များအားလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။ (မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည်။)
ကံထူးရှင်များအားလုံးသည် MPT မှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင် ထားခြင်း ရှိရမည်။
Postpaid၊ CDMA၊ B2B သုံးစွဲသူများ၊ MPT ဝန်ထမ်းများနှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်မရှိပါ။
မည်သည့်အကြောင်းရင်းကြောင့်မဆို အပတ်စဉ်ကံထူးရှင်အား ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု (၃) ကြိမ်ဆက်တိုက် ဆက်သွယ်၍ မရပါက MPT အနေဖြင့် ကံထူးရှင်နောက်တစ်ဉီး ရွေးချယ်နိုင်ခွင့် (သို့) ငြင်းပယ်သော/ ပျက်ပြယ်သော ဆုမဲကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခွင့် (သို့) ၄င်းကိုအခြားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ခွင့်ကို ထိန်းသိမ်းထားရှိပါသည်။
ကံထူးရှင်ဖြစ်ကြောင်း MPT မှ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားသည့်နေ့မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကံထူးရှင်သည် MPT မှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ထားရန် ပျက်ကွက်ပါက MPT မှ ဆုလက်ဆောင်ကိုပေးအပ်ရန် ငြင်းပယ်ခွင့်ရှိသည်။
အကယ်၍ကံထူးရှင်အနေဖြင့်ဆုရယူရန်ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် MPTအနေဖြင့် ကံထူးရှင်နောက်တစ်ဉီး ရွေးချယ်နိုင်ခွင့် (သို့) ငြင်းပယ်သော/ ပျက်ပြယ်သော ဆုမဲကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခွင့် (သို့) ၄င်းကိုအခြားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ခွင့်ကို ထိန်းသိမ်းထားရှိပါသည်။
MPT ၏ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှ ခံစားခွင့်မပြုထားသော မည်သည့်ကုန်ကျစားရိတ်ကိုမဆို MPT မှကျခံပေးသွားမည် မဟုတ်ပါ။
ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ မည်ကဲ့သို့ပင် ဖော်ပြထားစေကာမူ MPTသည် ယင်း၏ တစ်ဦးတည်း ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အရ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းခြင်း (သို့) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ကြိုတင်အသိပေးခြင်း (သို့) တာဝန်ခံခြင်းမရှိဘဲ ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကို အခါအားလျော်စွာ ပြုလုပ်ခွင့်ရှိသည်။
ဆုပစ္စည်းတစ်ခုခုကို လက်ခံရာတွင် ကံထူးရှင်၏ အမည်၊ ဓာတ်ပုံ၊ အသံနှင့် (သို့) အလားတူအခြားဖြစ်ရပ်တို့ကို ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသည့် ဖြစ်ရပ်များမှအပ MPTက ပြုလုပ်သည့် သတင်း၊ ကြော်ငြာ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး နှင့် (သို့) အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အခကြေးငွေမပေးဘဲ အသုံးပြုရန် သဘောတူ ကြောင်း လည်း ပါဝင်သည်။
ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းနှင့် ဆုပစ္စည်းလက်ခံယူရာတွင် သုံးစွဲသူများသည် ယင်းနှင့်စပ်ဆက်ပြီး ဖြစ်ပေါ် သည့် ဆုံးရှုံးမှု(သို့)ထိခိုက်မှု(ထူးခြားသော၊ သွယ်ဝိုက်သော ဆုံးရှုံးမှု နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆုံးရှုံးမှုများ အပါအဝင်)များ နှင့် ပတ်သက်ပြီး တောင်းဆိုမည်မဟုတ်ကြောင်း သဘောတူရမည်။
အငြင်းပွားဖွယ် တစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါက MPT ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အတည်ဖြစ်သည်။
၁။ တတိယအကြိမ်မြောက် “ကံထူးပျော်ရွှင် ၂၀၂၁ အစီအစဉ် ”ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်က ဘာပါလဲ?
MPT ကို အစဉ်တစိုက် သုံးစွဲသူများအတွက် ဒေတာဆုကြီးများနှင့် အပတ်စဉ်ဆုများဖြင့် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ထားတဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ MPT GSM/WCDMA နှင့် Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများသည် မည်သည့် Channel (USSD/ E-Topup/DMS/ SDP/MPT4U / Mobile Money) ဖြင့်မဆို ၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ရုံနဲ့ MPT4U app ထဲရှိ “Top up Hti Pauk” တွင် ကံစမ်းရန် Chance များရရှိပြီး အပါတ်စဉ် ဒေတာဆုများ (သို့) ဆုကြီးများကံစမ်းရန် tickets များ ရရှိကံထူးနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀ကျပ်ကို Chance (၁)ခု ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကံစမ်းရန် tickets များများရလေ ဆုကြီးများ ကံထူးရန် အခွင့်အရေး ပိုမိုရရှိလေဖြစ်ပါတယ်။
၂။ “ကံထူးပျော်ရွှင် ၂၀၂၁ အစီအစဉ် ” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ?
၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀ ကျပ်ကို Chance (၁)ခုရရှိပြီး MPT4U app ထဲရှိ “Top up Hti Pauk” တွင် Chance များဖြင့် ကံစမ်းကာ ကံထူးနိုင်သည့် အပါတ်စဉ် ဒေတာဆုများ (သို့) ဆုကြီးများအတွက် tickets များ ရရှိကံထူးလိုက်ပါ။ ဖုန်းငွေများများဖြည့်ပါက Chance များများ ရရှိကံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
MPT GSM/WCDMA Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများအားလုံးသည် ၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ် ဖြည့်ပါက Chance များရရှိပြီး ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မှာပါ။
ဟုတ်ကဲ့။ Base Tariff အသုံးပြုသူများလည်း ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ Base Tariff သုံးစွဲသူများသည် အပတ်စဉ်ဆုကြီးများကိုသာ ကံစမ်းခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဒေတာဆုလက်ဆောင်များကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ဒေတာဆုလက်ဆောင်များ အသုံးပြုလိုပါက ဆွေ/ ရှယ်/ ရွှေ အစီအစဉ်များသို့ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀ကျပ်ဖြည့်ထားပြီး Chance (၁)ခုရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားစာ ရရှိထားပါတယ်။ ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ?
ရရှိထားသော Chance ကို MPT4U app ထဲရှိ “Top up Hti Pauk” တွင် ကံစမ်းပြီး အပတ်စဉ်ဒေတာဆုများ (သို့) ဆုကြီးများ ကံစမ်းရန် tickets များ ရရှိကံထူးနိုင်မှာပါ။ MPT4U app မရှိပါက *4040# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီး အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ရယူလိုက်ပါ။
၆။ ၃၀၀၀ကျပ် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ထားပါတယ်။ Chance ဘယ်နှခုရရှိမှာပါလဲ?
ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀ကျပ်ကို Chance (၁)ခု နှုန်းဖြင့် စုစုပေါင်း Chance (၃) ခု ရရှိကံစမ်းနိုင်မှာပါ။ ရရှိထားသော Chance(၃)ခု ကို MPT4U app ထဲရှိ “Top up Hti Pauk” တွင် ကစားပြီး အပတ်စဉ်ဒေတာဆုများ (သို့) ဆုကြီးများကံစမ်းနိုင်ရန် ticket (၃) ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ အပတ်စဉ်ဆုကြီး ကံထူးခဲ့ပါက ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မှာလဲ။
အပတ်စဉ်ဆုကံထူးရှင်များကို MPT၏ တရားဝင် Facebook Page မှတစ်ဆင့် ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ticket များရရှိထားသည့်အပတ်၏ နောက်(၁)ပတ်ဇန်နဝါရီလ (၂၃)ရက် နေ့တွင်ကြေညာပေးသွားမှာပါ။
၈။ ဖုန်းဘေလ် (၁၀၀၀) ကို USSD Channel မှတစ်ဆင့် ဖြည့်ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖုန်းဘေလ် (၃၀၀၀) ကို MPT4U မှ ထပ်ဖြည့်ပါတယ်။ ရရှိသော Chance များမှာ ပေါင်းစည်းသွားမှာပါလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ မတူညီသောနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းပြီး ရရှိလာသော Chance များ ပေါင်းစည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၉။ ရရှိထားသော Tickets များ၏ အရေအတွက်ကို ဘယ်လို စစ်ဆေးနိုင်ပါမလဲ။
ရရှိထားသော Tickets များ၏ အရေအတွက်ကို *224# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆို၍ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
၁၀။ Chance ၁ခု ရရှိထားပါက ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါသလား။
Chance ၁ခု ရရှိထားပါက ရရှိထားသော Chance ကို MPT4U app ထဲရှိ “Top up Hti Pauk” တွင် ကစားပြီး အပတ်စဉ်ဒေတာဆုများ (သို့) ဆုကြီးများ ကံစမ်းရန် tickets များ ရယူရန် လိုအပ်သည်။
၁၁။ တစ်နေ့လျှင် မည်သည့်အကြိမ်ခန့် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်နိုင်ပါသလဲ။
ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ဖုန်းဘေလ်ဖြည့် နိုင်ပါတယ်။
၁၂။ ဖုန်းတစ်လုံးမှ အခြားဖုန်းတစ်လုံးသို့ ဖုန်းငွေဖြည့်ပေးခြင်းသည် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသလား။
ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ ဖုန်းငွေဖြည့်ပေးမည်ဆိုပါက ဖုန်းဘေလ်လက်ခံရရှိသူက Chance များရရှိမှာပါ။
၁၃။ ငွေလွှဲပြောင်း၍ ဖြည့်သွင်းခြင်း (Balance Transfer) ဖြင့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသလား။
မပါဝင်နိုင်ပါ။ ငွေလွှဲပြောင်း၍ ဖြည့်သွင်းခြင်း (Balance Transfer) ဖြင့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် မပါဝင်နိုင်ပါ။
၁၄။ ကံစမ်းမဲကာလက ဘယ်အထိလဲ?
ကံစမ်းမဲကာလသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၈) ရက်နေ့မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါတယ်။